Tantara - Blch Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.
WENZHOU BLCH Pneumatic Science & Technology Co. Ltd dia novatsian'ny mpampiasa vola 5 tao amin'ny Tianyang Village, yuecheng Town, Yueqing City, izay manana mpiasa mihoatra ny 10 sy 300000 yuan ny sandan'ny famokarana isan-taona.
Mba hanafainganana ny hafainganam-pandehan'ny orinasa, 5,5 tapitrisa yuan ny renivola voasoratra anarana an'ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany dia nakarina ho Zhejiang Bailing Technology Co., Ltd. ny anaran'ny orinasa, miaraka amina mpiasa maherin'ny 70 ary lanja mihoatra ny 3 tapitrisa yuan ny vokatra isan-taona.
Voakasiky ny krizy ara-bola manerantany, mihoatra ny 4,9 tapitrisa yuan ny sandan'ny famokarana isan-taona, saingy tsy nampihena ny volan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny mpiasa ny orinasa, ary nampiditra talenta ara-teknika sy fitantanana fitobiana marobe, nametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana haingana ny orinasa.
Ny faritra indostrialy vaovao izay misy velarana 30 hektara ao amin'ny faritry ny Fampandrosoana Toekarena ao Yueqing dia nanomboka ny fanamboarana. Eo ambany fitarihan'ny mpitarika ny orinasa dia nivoatra haingana ny orinasa, misy mpiasa maherin'ny 70 ary lanjanam-pamokarana mihoatra ny 10 tapitrisa yuan isan-taona.
Ny orinasa dia nahomby tamin'ny famolavolana vokatra andian-tsarimihetsika pneumatika ary napetraka tao amin'ny tsipika famokarana. Tamin'ny faran'ny volana desambra dia nahavita sanda famoahana tokana 1,5 tapitrisa yuan ary sanda famoahana mihoatra ny 18,92 tapitrisa yuan. Tamin'io taona io ihany dia nanomana sy nampihatra ny sehatr'asa Kingdee ERP ny orinasa mba hanara-penitra kokoa ny fizotran'ny asa.
Nampitombo ny fanavaozana ara-teknika ny orinasa ary nanatsara ny rohy fizotry ny famokarana isan-karazany. Tonga lafatra kokoa ny vokatra ary nilamina kokoa ny kalitao. Mandritra izany fotoana izany dia nividy andiana fitaovana famokarana misy atiny teknolojia avo lenta, manam-pahaizana manokana ary teknolojia feno, izay nanatsara ny kalitaon'ny vokatra ary nanafaingana. Fahombiazan'ny famokarana. Ny sandan'ny vokatra isan-taona dia mahatratra 50 tapitrisa yuan.
Ny andian-tsarimihetsika vita amin'ny solika sy ny vata fantsom-bokatra PU dia nahomby, ary niaraka tamin'izay dia nametraka departemanta famokarana sy famokarana roa handrefesana ny famokarana, asa vaovao 80 mahery, nahavita ny baiko famokarana mihoatra ny 60 tapitrisa yuan, ary nahatsapa tamim-pahombiazana ny sandan'ny vokatra isan-taona mitentina 80 tapitrisa yuan. .
Manoloana ny fangatahan'ny tsena ho an'ny isam-batan'olona dia nihatsara be ny vidin'ny mpiasa. Eo ambany fanerena isan-karazany dia tapa-kevitra ny hampiasa vola be amin'ny automatisation sy ny fampahalalam-baovao ny orinasa hahatsapa ny fampiroboroboana an-tsaina sy nomerika ny orinasa, ary tamin'io taona io ihany, dia nametraka volavola hatramin'ny 120 tapitrisa izy. .